प्रडक्ट | News Polar
मखमली फुलेसँगै तिहार नजिकिँदै (फोटो फिचर)
भक्तपुर । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९, ताथलीस्थित वनमाला टोलमा ढकमक्क मखमली फूल फुलेको छ । मखमली फुलेसँगै तिहार नजिकिँदै गरेको झल्को दिएको छ । यहाँका स्थानीयवासी व्यावसायिक रुपमा फूलखेती गर्ने गर्छन् । प्रतिमाला रु ३० देखि ३५ मा बिक्री हुने गर्दछ । (तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ, रास…
बाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर बढ्यो, ऋणीहरु पनि चिन्तित
काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त क बर्गका सबै बाणिज्य बैंकहरुले बचत र मुद्दती दुबै खातामा ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकमा तरलता अभाव भएसँगै बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा चलेको छ । पछिल्लो विवरण अनुसार कतिपय बैंकले मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने गरी आकर्षक योजना अघि सारेका छन् । हिमाल…
काठमाडौँ । सरकारले फलामे छडमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क हटाएसँगै फलामे छडको मूल्य घट्ने भएको छ । नेपाल फलामे छड उत्पादन सङ्घले स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तशुल्कमा छुट भएसँगै मूल्य घट्ने जनाएको हो । सङ्घले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घमा आवद्ध उद्योगलाई प्रतिकिलो रु चार मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको हो । बजेटमा…
हाँडीगाउँमा पौने दुई अर्बको अपार्टमेन्ट बन्दै
काठमाडौं । काठमाडौंको नक्सालमा पौने दुई अर्बको अपार्टमेन्ट बन्ने भएको छ । ‘रोयल स्टेट’ प्राइभेट कम्पनीले नक्सालस्थित हाँडीगाउँमा १४ तले लक्जरियस प्रिमियम अपार्टमेन्ट बनाउन लागेको हो । पौने दुई अर्ब लागतमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त अपाटमेन्ट अबको ३ वर्ष अर्थात सन् २०२४ सम्ममा तयार हुने बालाजी इन्भेष्टमेन्ट प्रालि …
काठमाडौं । फोन पे पेमेन्ट सर्भीस लिमिटेडले आफ्ना मर्चेन्टहरुलाई लक्षित गर्दै सुरू गरेको ‘आम्मामामा क्यूआारमा उपहार, दिनदिनै एकलाख’ योजनाका बिजेता सार्वजनिक गरेको छ । श्रावण १३ गतेदेखि सञ्चालन भएको यस योजनामा हरेक दिन एक जना मर्चेन्टले एकलाख रूपैयाँ जित्दै आएका छन् । हालसम्म १३ जना मर्चेन्टले एक&ndas…
काठमाडौं । हुन्डाईको आधिकारीक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले नयाँ जेनेरेशन हुन्डाई आई–२० आगामी बिहिबारबाट विक्री सुरु गर्ने भएको छ । हुन्डाईको सफल एसयूभी क्रेटा र सेडान भर्नाको धेरै फिचर समावेश गरिएको आई–२० पहिलेभन्दा थप स्पोर्टी र ठूलो साइजमा आउने भएको हो । प्रिमियम ह्याचव्याक सेग्मेन्टको…
काठमाडौँ । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एकमात्र आधिकारीक बितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि. र एनएमबी बैंक लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ । अब टाटा मोटर्सको इलेक्ट्रीक भेहिकल नेक्सन इभी खरिद गर्न चाहने खरिदकर्ताले एनएमबी बैंक लिमिटेडको नेपालभरीका शाखाहरु मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने जनाएको छ ।&nb…
काठमाडौं । इ भी नेपाल मोटोर्सको स्वरूम काठमाडौं स्थित नक्सालमा उत्घाटन गरिएको छ । उक्त स्वरूममा जर्मन टेक्नोलोजी द्यइक्ऋज् द्वारा संचालित लिभ्निंगको विभिन्न मोडेल र रंगहरूका इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध रहेको छ । जसमा LX01, LX02, LX04, LX05, LX06, LX08, LX05-D, LN20M04- 250W रहेको छ । साथै इलेक्ट्रिक साइकल पनि उपल…
काठमाडौं । फोन पे पेमेन्ट सर्विस लिमिटेडले आफ्ना मर्चेन्टहरुलाई लक्षित गर्दै ‘आम्मामामा क्यूआारमा उपहार, दिनदिनै एकलाख’उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ । देशभरका व्यवसायीलाई डिजिटल भुक्तानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले यो योजना ल्याइएको हो । फोनपेको नेटवर्कमा आवद्ध भैसकेका र आवद्ध हुन चाहने साना …
लहान । सिरहामा वर्षेनी रासायनिक मलको माग बढ्दै गएको छ । माग अनुसार रासायनिक मलको आपूर्ति हुन नसकेपछि किसान समस्यामा परेका छन् । लहानस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा वर्षेनी डिएपी र युरिया मलको आपूर्ति घट्दै गएपछि अन्य रासायनिक मलको बिक्री वितरण बढेको हो । एकातिर सिरहामा रासायनिक मलको माग बढ्दै गएको छ भने अ…